Ny varotra MacBook dia nitombo 94% tamin'ny telovolana voalohany tamin'ity taona ity | Avy amin'ny mac aho
Tamin'ny telovolana voalohany tamin'ity taona ity dia efa saika nivarotra i Apple MacBook 6 tapitrisa. Tombantombana ireo isa ireo, satria matetika ny orinasa dia tsy manome fampahalalana betsaka momba ny varony, na dia tarehimarika hireharehana aza izy ireo.
Azo antoka fa ny vanim-potoana vaovao an'ny Macs Silicon Apple Fahombiazana ho an'ny orinasa izany. Filokana mety hampidi-doza an'i Apple, ao anatin'ny vanim-potoanan'ny areti-mandringana manerantany, saingy tsy isalasalana fa ilay marina. Ary ankehitriny, ny iMac voalohany koa dia miseho miaraka amina processeur M1. Fotoana tsara ho an'i Apple, tsy isalasalana.
Apple dia namidy tombanana 5,7 an-tapitrisa an'ny MacBooks amin'ny telovolana voalohany tamin'ny 2021, mifototra amin'ny vinavina fivarotana solosaina finday vaovao navoaka amin'izao fotoana izao avy amin'ny Strategy Analytics.
Ny isa dia misy ny varotra maodely MacBook Pro y MacBook Air, tsy manilika Mac mini, Mac Pro, ary iMac. Izany hoe, ny solosaina findain'ilay orinasa ihany.
Apple no mpanamboatra solosaina finday fahaefatra lehibe indrindra manerantany, nandalo ny Dell, HP ary Lenovo, miaraka amin'ireo orinasa telo mandefa solosaina finday 10 ka hatramin'ny 16 tapitrisa mandritra ny telovolana voalohany tamin'ny 2021.
Ny solosaina finday 5,7 tapitrisa amidin'i Apple dia nitombo 94 isan-jato raha oharina amin'ny 2,9 tapitrisa naloany tamin'ny telovolana teo aloha. Izany rehetra izany dia noho ny fitomboana matanjaka azo avy amin'ny fangatahana mitohy avy amin'ireo mpampiasa miasa na mianatra any an-trano noho ny areti-mandringana, ary ny fanekena tsara ireo mpampiasa ho an'ny Mac vaovao miaraka amina processeur. M1.
Ny anjaran'ny tsenan'ny Apple tamin'ny telovolana dia 8.4 isan-jato, raha oharina amin'ny 7.8 isan-jato tamin'ny taon-dasa. Lenovo y HP izy ireo dia mitohy ho mpitarika tsena, mivarotra solosaina finday isan-karazany izay mitantana Windows miaraka amin'ny Chromebooks, miaraka amin'ny fitomboana lehibe eo amin'ny sehatry ny fanabeazana, indrindra noho ny vidiny.
Varotra tsara noho ny M1
Ny MacBook vaovao dia miandry ny famoahana tsy ho ela.
Ny fivarotana laptop total dia nitombo 81 isan-jato isan-taona isan-taona tamin'ireo mpivarotra lehibe rehetra. Apple Manokana indrindra dia mety nahita fitomboana lehibe izy io, noho ny fanombohana tamin'ny novambra ny MacBook Pro M1 13 sy MacBook Air XNUMX-inch.
Azo inoana fa hitazona ny fitomboan'ny varotra PC i Apple rehefa miomana ny hampiditra modely Apple Silicon vaovao matanjaka kokoa izy amin'ny faran'ity taona ity. Ny tsaho dia milaza fa misy maodely nohavaozina an'ny MacBook Pro 16-inch vonona ny hatomboka, ary a iMac M1 lehibe kokoa noho ny 24-inch ankehitriny. Apple koa antenaina hampiditra MacBook Air vaovao sy MacBook Pro vaovao, saingy mety tsy ho tonga izy ireo raha tsy amin'ny 2022.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny varotra MacBook dia nitombo 94% tamin'ny telovolana voalohany tamin'ity taona ity